Per Akwa arụmọrụ Okpomọkụ nyefee Media.
Efficiency Nnukwu arụmọrụ, nchekwa ike na nchebe gburugburu ebe obibi
Kọmpat udi, mfe echichi
■ Ike mgbochi corrosion ike, ogologo ọrụ ndụ.
■ Patented Clog free nozulu
■ Energy - ịzọpụta na gburugburu ebe obibi - enyi na enyi okpomọkụ mgbanwe ngwá
•Kemwepu Enwere ike ihichapu pc: non corrosive PVC, Nanị imewe
Pọrụ mmiri nke Ọrụ: Hot usoro mmiri si Ibu Ibu / usoro / usoro abatakwa na usoro nkesa mmiri na elu nke obi jụrụ ụlọ elu ebe ọ na-ekesa n'elu ukwuu oru oma jupụta ma ọ bụ ikpo ọkụ na-enyefe ọkụ. NaFans axial, nke dị n'elu elu nke otu ahụ, mee ka ikuku si n'akụkụ nke unit n'elu ihe jupụtara n'ime. Ihe ndozi ahụ na-eme ka ikuku na-agba ọsọ, na-eme ka ebe a na-enyefe ọkụ dị n'etiti mmiri usoro na ikuku, ma na-eme ka ntụgharị ntụgharị ọkụ dịkwuo mma.
Inlet Louvers na-echebe ụlọ elu ahụ site na ihe ndị si mba ọzọ na-adọta na ngalaba. Mgbe mmiri ọkụ na-ekpo ọkụ na-abanye na ikuku oyi, ikuku na-ekpo ọkụ na akụkụ nke usoro mmiri a na-ekpochapụ nke na-ewepu okpomọkụ na mmiri fọdụrụ. Mmiri oyi na-adaba na bezin dị n'okpuru mgbe nke a gasịrị ọ laghachiri na sistemụ / ibu. The ọkụ jupụta ikuku na-apụ n'ụlọ elu ahụ site n'elu, tupu ya agafere ndị na-ekpochapu mmiri, nke na-ejide ụmụ irighiri mmiri site na ikuku na-etinye ya na bezin ahụ n'okpuru.
•Ngwongwo ígwè •Polyfilm
•Ngwuputa •Osisi ike
Nke gara aga: Evaporative Condenser - Cross Flow
Osote: Igwe oyi
Jụrụ Tower Systems
Jụrụ Water Water Ọgwụgwọ
Enwetara Draft Cooling Tower
Clọ Mmiri Na-ajụ Mmiri
AIO Refrigeration Sistem Na Evaporative Conde ...